हिमाल खबरपत्रिका | लाज लाग्यो
‘ढुङ्गा–गिट्टीको व्यापार, जनप्रतिनिधिको अनुहार’ (१२–१८ फागुन) रिपोर्टले राजनीतिको आवरणमा फस्टाउँदै गएको अवैध धन्दाको खुलासा गरेको छ । क्रसर उद्योग खोलेर प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरिरहे जस्तै डोजर व्यवसाय गर्ने जनप्रतिनिधिको संख्या पनि ठूलो छ । जसले स्थानीय निकाय अन्तर्गतका आयोजनाहरूमा आफ्नै डोजर चर्को मूल्यमा भाडामा लगाएर स्रोतको दुरुपयोग गरिरहेका छन् । हिमाल का आगामी अंकहरूमा देशव्यापी भइरहेको यस्तो अवैध धन्दाको व्यापक खुलासा गरिने अपेक्षा राखेको छु । जनप्रतिनिधिले चुनावअघि गरेका सबै बाचा बिर्सिएर सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गर्दा कत्ति पनि लाज मानेका छैनन् । बरु लाज हामी मतदाताले मान्नुपर्ने बेला आएको छ, कस्तालाई प्रतिनिधि छनोट गरिएछ !
एकराज पाण्डे, इमेलबाट
१० जिल्लाको प्रदेश–२
प्रदेशहरूको पुनर्संरचना बारेको टिप्पणी ‘प्रदेश संरचनामा परिमार्जनको आवश्यकता’ (१२–१८ फागुन) बारे थप भन्न मन लाग्यो । पहिलो त, देश संघीयतामा किन गएको भन्ने नै स्पष्ट नगरी प्रदेशहरू बनाइयो । प्रदेश निर्माण नै गर्नु थियो भने, पहिलेका पाँच विकास क्षेत्रलाई नै पाँच प्रदेश बनाउनु सर्वथा उत्तम हुन्थ्यो । अब सम्भावित द्वन्द्व समाधानका लागि सात प्रदेश नै बनाउने हो भने ओखलढुंगा, सोलुखुम्बु, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी र सर्लाही १० जिल्लाको प्रदेश–२ (जानकी प्रदेश) बनाउनु उचित हुनेछ । कर्णाली प्रदेशमा पूर्वी रुकुमलाई समेत समावेश गराउनुपर्छ । उसो त नेपालमा केन्द्र सरकार र बलिया स्थानीय निकाय भए पुग्छ । हाम्रो आवश्यकता प्रदेश होइन ।
डिल्ली भट्टराई, अनलाइनबाट
संविधान जारी हुने बेलामा नै पाँच विकास क्षेत्रलाई पाँच प्रदेश बनाउनु उत्तम हुन्थ्यो । तर, तत्कालीन क्षेत्रीय र जातीय दबाबले तराईका ८ जिल्ला मात्रैको प्रदेश–२ बनाइयो, जुन ठूलो भूल थियो । अहिले लेखकले दिएको सुझव व्यावहारिक देखिन्छ ।
पूर्ण वली, अनलाइनबाट
जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी ‘सँघारमा संकट’ (१२–१८ फागुन) आवरण रिपोर्टले हामीलाई समयमै सजग बनाएको छ । जलवायु परिवर्तन र तापमान वृद्धि सम्बन्धी यति जानकारी भइसकेपछि हामीबाटै सिर्जित संकटलाई रोक्न सकिन्छ भन्ने लागेको छ । भयावह दुष्परिणाम भोग्नुपर्ने स्थितिमा पुग्नुअगावै हामीले समयमै जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने तयारी थाल्नुपर्छ ।
मानव पुरी, इमेलबाट
समाधान सूत्र के ?
‘निख्रिंदै हिमाल’ (१२–१८ फागुन) आवरण रिपोर्टले हाम्रा हिमाल निख्रिन लागेको त देखायो, तर जोगाउने ठोस उपाय के त ? समाधानको पाटोमा पनि रिपोर्ट हुनु आवश्यक छ । समस्या मात्र देखाएर समाधान नपहिल्याउने हो भने हामी पाठकले के निष्कर्ष निकाल्ने ? फेरि हामी जस्तो सानो मुलुकले जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा ठूलो काम के नै गर्न सक्छौं र ! जलवायुको क्षेत्रमा जसले बढी प्रदूषण गरेका छन् उनीहरूले पो त्यसको रोकथाम गर्नुपर्ने होइन र ? हामी त सँघारमा रहेको संकटलाई टुलुटुलु हेर्न बाध्य छौं ।
साक्षी झा, इमेलबाट
बीमाबारे गज्जब जानकारी
जीवन बीमा सम्बन्धी अन्तरक्रिया ‘फैलिंदै पहुँच’ (१२–१८ फागुन) ले बीमाबारे गज्जब जानकारी दिएको छ । आर्थिक जोखिमलाई न्यून गर्ने बीमा बारेको विज्ञहरूको अन्तरक्रियाबाट बीमाबारे साङ्गोपाङ्ग बुझन सजिलो भयो । नयाँ–नयाँ कम्पनी र उनीहरूको बजार विस्तारलाई पनि यस्ता सुझवले राम्रै गरी सघाउने छ भन्ने विश्वास लिन सकिन्छ ।
रमण शर्मा, इमेलबाट
जर्मनीको सुरक्षा तथा अन्तर्राष्ट्रिय मामिला प्रतिष्ठानका वरिष्ठ एशिया विज्ञ डा.क्रिष्टियन वाग्नरको ‘नेपालका जटिलता धेरै पश्चिमाले बुझन सक्दैनन्’ (१२–१८ फागुन) अन्तर्वार्ताले अहिलेको समसामयिक विषयलाई सटिक रूपमा विश्लेषण गरिदिएको छ । नेपालको हितापेक्षी वाग्नरको विचारलाई मनन गर्दै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा कसरी फाइदा लिन सकिन्छ भनेर लाग्नुपर्छ । चीन र भारतबीचको रणनीतिक प्रतिस्पर्धामा नेपालको संघीयतालाई कसरी सफल बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि डा.वाग्नरको विचार सटिक छ ।
भावुक पौडेल, अनलाइनबाट